Hurumende yeMubatanidzwa Yoramba Yoita Zinyekenyeke
Chivabvu 13, 2010
Nyaya yekuti hurumende yava kukwikwidza zvakare mutongo wakapiwa nedare panyaya yaVaRoy Bennett, inonzi nevamwe chiratidzo chikuru chekusadhonzera pamwe kuri kuitika muhurumende yemushandira pamwe.
Bato reZanu PF riri kunzi riri kupika kuti VaBennett havafi vakagadzwa semutewedzeri wegurukota rezvekurima. Asi VaMugabe vakanga vasiya gonhi rakashama, vachiti vanomirira zvichabuda mumatare.
Nyaya yekuti VaBennett vagadzwe segurukota, ndeimwe yezvinhu zviri kunetsa muGlobal Political Agreement, izvo zviri kutadzisa hurumende iyi kufambira mberi zvakanaka. Zvimwe zviratidzo zvekusafamba zvakanaka kwehurumende yemubatanidzwa, kusataura nezwi rimwe chete kuri kuitwa nevatungamiri vemapato ari muhurumende, panyaya yekuti sarudzo dzichaitwa riini.
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pamwe nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vari kuti sarudzo dzichaitwa gore rinouya, asi mutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, vakazivisa kuti vari kufunga kudaro vari kurota zvavo vachiyamwa.
Nyanzvi munyaya dzezvemaotongerwo enyika, uye vari mutungamiri weCenter for Community Development, VaPhilip Pasirayi, vanoti divi reZanu PF muhurumende iyi, harisi kufambisa zvinhu zvakanaka munhurumende.
Asi munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions, ZFTU, VaKennias Shamuyarira, vanoti kukwidzwa kwemutongo nehurumende ikodzero yemunhu wese muZimbabwe.
Hurukuro naVaPhilip Pasirayi Uye VaKennias Shamuyarira